TPCH waxay ku martiqaadaysaa Codsiyada Barnaamijka CoC iyo Lacagaha Cusboonaysiinta ee YHDP. Codsiyada waa in la helaa Oktoobar 8, 2021. - Tucson Pima Wadashaqayn lagu joojinayo Hoylaawe
TPCH waxay casuumaysaa Codsiyada Barnaamijka CoC iyo Lacagaha Cusboonaysiinta ee YHDP. Codsiyada waa in la helaa Oktoobar 8, 2021.
by	Jason Thorpe	/ Axad, 12 Sebtember 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
OGEYSIIS: SEPTEMBER 9, 2021
Taariikhda Loo Qabtay Codsiga - Oktoobar 8, 2021 (12pm Duhurnimo - Waqtiga AZ)
TPCH waxay sii deysay agabkii dalabka maxalliga ee Tartanka Maalgelinta Barnaamijka Daryeelka FY 2021 ee Degmada Tucson/Pima. Macluumaadka fursadda maalgelinta iyo tilmaamaha codsiga ayaa lagu dhajiyay https://tpch.net/about/nofa-documents/fy-2021/.
Ururada danaynaya inay codsadaan Barnaamijka Daryeelka Joogtada ah ee FY 2021 iyo Miisaaniyadda Mashruuca Banaanbaxa Dhalinyarada waa inay ku bilowdaan iyagoo si taxaddar leh u fiirinaya FY 2021 Sii Socodka Daryeelka Barnaamijka Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta, HUD maalgelinta bogga shabakadda tartanka, iyo TPCH FY 2021 CoC Maalgelinta Barnaamijka Maalgelinta Barnaamijka CoC Dulmarka, Tilmaamaha, iyo Habraaca Degmada Tucson/Pima ee lagu dhajiyay https://tpch.net/about/nofa-documents/fy-2021/.
Maalgelinta la heli karo
Tartanka maalgelinta ee Tucson/Pima County FY 2021 waxaa ku jira afar qaybood oo ah maalgelin la heli karo:
Lacagaha Cusboonaysiinta Barnaamijka CoC: Wadar ahaan $ 8,544,055 ayaa loo heli karaa cusboonaysiinta abaalmarinnada deeqda Barnaamijka Daryeelka Sii Socda. Guddiga Daryeelka Joogtada ah ayaa go'aamiyey in mashaariic aan la marin meelaynta aan qasabka ahayn inta lagu jiro tartanka maalgelinta FY 2021. Kaliya hay'adaha hadda la siiyay deeqda Barnaamijka CoC ee maalgelinta deeqda ku dhacda Sannadka Kalandarka 2022 ayaa u qalma inay ku codsadaan qaybtan.
Miisaaniyadda Banaanbaxa Dhallinyarada ee Dib -u -cusboonaynta iyo Beddelidda Lacagta: Wadar ahaan $ 2,091,492 ayaa diyaar u ah cusboonaysiinta ama beddelka Mashruuca Muujinta Dembi -Darrada ee Dhallinyarada ee hadda jira (YHDP) abaalmarinnada ku dhacaya Sanadka 2022. Ururrada hadda la siiyay deeqda deeqda YHDP ee ku eg Sanadka 2022 ayaa xaq u leh inay codsadaan qaybtan.
Barnaamijka Gunnada CoC: Wadar ahaan $ 531,777 ayaa loo heli karaa codsiyada mashruuca cusub ee mashaariicda guriyeynta taakulaynta joogtada ah ee hodanka ku ah adeegga oo loogu talagalay dadka la kulma heerarka u-qalmitaanka Hoy la'aanta iyo/ama Dedicated Plus. Ururada aan hadda maamulayn lacagaha Barnaamijka CoC waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan.
Barnaamijka Gunnada Rabshada Guriga: Wadar ahaan $ 1,108,660 ayaa loo heli karaa codsiyada mashruuca cusub ee dib -u -dejinta deg -degga ah, guryaha ku -meelgaarka ah ee ku -meelgaarka ah - dib -u -dejinta deg -degga ah, iyo adeegyada taageerada oo keliya - mashaariicda gelitaanka isku -duwaha loogu talagalay dadka ka cararaya ama isku dayaya inay ka cararaan rabshadaha qoyska, rabshadaha shukaansiga, xadgudubka galmada, ama dabagalka, oo ay ku jiraan dhibanayaasha tahriibinta dadka. Ururada aan hadda maamulayn lacagaha Barnaamijka CoC waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan.
Aqoon-is-weydaarsiyada Soo-jeedinta Hore
TPCH waxay martigelin doontaa saddex aqoon-isweydaarsi hore-soo-jeedin onlayn ah oo loogu talagalay codsadayaasha mashruuca cusub iyo cusboonaysiinta.
RSVP ee Mashruuca Muujinta Banaanbaxa Dhalinyarada Dib -u -cusboonaysiinta iyo Beddelidda Webinar
Sebtember 20, 2021 8:30 subaxnimo
Waa qasab dhammaan codsadayaasha mashruuca cusboonaysiinta YHDP
RSVP ee Webinar Codsiga Cusboonaysiinta CoC
Sebtember 21, 2021 9:00 am
Waa qasab dhammaan codsadayaasha mashruuca cusboonaysiinta CoC
RSVP ee Codsiga Mashruuca Cusub ee Webinar
Sebtember 22, 2021 8:30 am
Aad baa loogu dhiirri -geliyay dhammaan codsadayaasha mashruuca cusub ee CoC
Booqo https://tpch.net/about/nofa-documents/fy-2021/ macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan fursadan maalgelinta iyo tilmaamaha codsiga. Iimayl u dir su'aalaha ku saabsan tartankan tpch-nofo@tucsonaz.gov. Fadlan u oggolow ilaa 3 maalmood oo shaqo jawaabta.